Ekoatera : ny fampiasana ny fampahalalam-baovao mandritra ny fampielezan-kevitra amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2008 17:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Miaramila tamin'ny fankalazana ny fahaleovan-tena tao Kito. Sary tao amin'ny Presidencia de la Republica, ary ampiasaina miaraka amin'ny fepetran'ny Creative Commons.
Andro tsy hiasana ny faha-10 Aogositra any Ekoatera, natao hahatsiarovana ny faha-10 Aogositra 1809 – andro nanambaran'ny mponina avy ao Kito, notarihin'i Eugenio Espejo ny fahaleovan-tenan'izy ireo avy amin'i Espana. Samy nankalaza ny fahaleovan-tenany amin'ny fananganana ny sainam-pireneny, ny afomanga, ny mozika sy ny fampisehoana ara-kolotsaina ny mponina avy eo Ekoatera, na ny any an-toerana na ireo zanaka am-pielezana. Tsy hadinon'ny mpitoraka blaogy koa nefa ny fitsapan-kevi-bahoaka hatao any Ekoatera, indrindra ny fampiasana ny filazam-baovao handisoana hevitra ny ankizy sy ny mponina, sy ny fampiasan'ny fanjakana be loatra ireny fitaovana ireny hanomezana vahana ity fitsipan-kevi-bahoaka mikasika ny lalam-panorenana ity.
I Andres Martinez [es], mpitoraka blaogy ao amin'ny Ateniense en Madrid dia miresaka ny fandikana vilana ny fahafahana maneho hevitra amin'ny fahita lavitra ao Ekoatera. Milaza moa izy fa tsy misy intsony ny fanajana ny asa, ny moraly ary ny fetran'ny fahafahana. Faika-na fahitalavitra [Telegarbage] no niantsoany azy.
Nilaza kosa indray ny La Alharaca [es] fa tokony amin'ny zavatra hafa no handanian'ny fanjakana vola. Miasa amin'ny orinasa mpanao dokam-barotra lehibe ao Ecuador moa izy, ary nilaza fa be loatra raha $40 tapitrisa no laniana amin'ny dokam-barotra, ary tsy mbola nisy tahaka izany teo amin'ny tantaran'i Ekoatera. Hoy indrindra izy raha niresaka ny TGRP (Target Gross Rating Points) :
Faly be aho fa nahadika lahatsoratra sahady ianao.
13 Aogositra 2008, 21:55